Kuxoshwe uSolwazi wenyuvesi yase-Fordham ngokusolwa ukuthi ubedlala ngenduku yakhe ku-Zoom | Scrolla Izindaba
Kuxoshwe uSolwazi wenyuvesi yase-Fordham ngokusolwa ukuthi ubedlala ngenduku yakhe ku-Zoom
Ukuvevezela nokububula okuzwiwe ngumfundi bekuqhamuka kusolwazi wakhe ezama ukuvimba ukuba angachami ngesikhathi eqedela ukubhala i-email – ngokusho kukaHoward Robinson wasenyuvesi ebizwa ngokuthi i-Fordham.
Uxoshwe enyuvesi yase-New York ngemuva kokuthi umfundi embambe eshaya indlawabu ku-Zoom ngesikhathi sokufunda.
Ngokusho kwe-New York Post, uRobinson uvule icala lokuxoshwa ngokungafanele enyuvesi.
URobinson oneminyaka engama-68 ubudala, uthi ubengeke enze lokhu asolwa ngakho ngoba unenkinga yokuncipha kwe-testosterone kanye ne-erectile dysfunction.
Usola lesi sigameko ngenxa yokukhula kwe-prostate.
Lo mfundi uphinde wamangalela inyuvesi, ethi ubhekane nokugxekwa ngokubika lesi sigameko nanokuhambisa ividiyo.